मास्क किन नलगाएको ? भनेर सो’ध्दा महिलाले यस्तो जवाफले प्रह`री च’कित | Rochak
June 7, 2021 NepstokLeaveaComment on मास्क किन नलगाएको ? भनेर सो’ध्दा महिलाले यस्तो जवाफले प्रह`री च’कित
को’रोना भाईरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि सरकारले निषेधाज्ञा कतै लकडाउन लगाइरहेको छ । यदि काम विशेषले बाहिर जानु परेमा अनिवार्य रुपमा माक्स लगाउन आग्रह गरिरहेको छ । विना माक्स हिडनेलाई सरकारले काराबाही गरिरहेको छ । को’रोनाको संक्र’मण फैलिन नदिनको लागि भन्दै चोक चोकमा प्रहञरी परि’चालन गरिएको छ । दिल्लीमा क’र्फ्यु पनि लगाञइएको छ । तर सर्वसाधारणले प्रहरीको आग्रह समेत वे’वास्ता गरेका छन् ।
यहि को’रोनाको महामारीको विचमा पनि कारमा एक जोडी घुम्न नि’स्किएको देखिन्छ । उनीहरुले माक्स पनि लगाएका छैनन् । प्र’हरीले उनीहरुलाई रो’केर माक्स किन नलगाएको भनेर प्रश्न गर्दा ति महिलाले ब’बाल म’च्चाएको देखिन्छ । हालै सामाजिक स’ञ्जालमा एक भिडियो भाइरल भएको छ ।
कारमा मास्क नलगाई हिँडेको देखेपछि द’रयानीगंज क्षेत्रमा प्रह’रीले कार रोकेर ती जोञडीलाई मास्क किन नल’गाएको भनेर प्रश्न गरेका थिए। चर्को स्वरमा प्रति’क्रिया जनाउँदै कारमा सवार महिलालले प्रहञरीले आफूहरुलाई कारवाही गर्ने औकात नञराखेको भन्दै त्यहाँ तैनाथ प्रह’रीलाई ह’ प्का एकी थिइन् । प्रहरीलाई तथा’नाम भन्दै उनले मुख छोडेकी छन् ।
ती महिलाले आफूले श्रीमानलाई चु म्ब’ न गर्दा पनि मास्क लगाउनुपर्ने भन्दै प्रति’प्रश्न गरेपछि प्रहरी जवाफ वि’हिन भएको थियो । त्यती मात्र होइन उनी का’रवाट निस्केर पाखुरा सु र्क दै प्रहञरीलाई गा’ ली गरेको समेत भिडियोमा दे’ख्न सकिन्छ । दिल्लीमा हरेक शनिबार र आइतबार कर्फ्यू’ जारी गरिएको थियो ।
करफ्यूको नियम तो ड्’ दै ती जोडी बाहिर नि’स्किएका थिए । हाल दुवैलाई प’क्राउ गरेर हिराञसतमा लिइएको छ । पुरुञषको नाम पंकज हो भने महिञलाको नाम आभा भएको हिन्दु’स्तान टाइम्सले जनाएको छ ।
काठमाँडौ – भनिन्छ नि महिला र पुरुष एक रथको दुई पांग्रा हुन भनेर । जीवनको कुनै पनि मोडमा कुनै एउटा पांग्रा विग्रिएमा पनि एउटा पांग्राले सहज रुपमा यात्रा गर्न सकिदैन । नेपाल जस्तो पितृ सतात्मक सोच भएको देशमा त झन एउटा घरलाई स्वर्ग बनाउनको लागि पुरुषको भन्दा महिलाको अहम भुमिका रहेको हुन्छ ।
पुरुष अथवा लोग्ने मानिस बाहिर गएर कमाएर ल्याउने र महिला वा श्रीमति घरमा बसेर घरको सफा सुग्गार बनाउने भन्ने भावना छ तर पछिल्लो समय भने यो पुरातन बादि सोच विस्तारै परिवर्तन हुदै गईरहेको छ । राम्रो स्वभाव भएका स्त्री भयो भने पतिको जिबन एकदम राम्रो हुन्छ ।
अनि त्यसै गरि राम्रो स्वभाव भएको पति भयो भने पनि स्त्रीको जिबन स्वोर्गीय हुन्छ । तर यी दुइ जना मध्ये एकजना नराम्रो भयो भने पनि दुबैको जिबन नर्ग समान हुने गर्दछ । हामीले महिलाहरुमा पाइने ५ नराम्रा स्वभावबारे जानकारी गराउँदैछौँ, त्येसो त पुरुषहरु चाही सबै राम्रा हुन्छन भन्ने होइनन् । पुरुषका कारण पनि सम्बन्धमा धेरै समस्या आउन सक्छन् ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ३२ वर्षीया महिलाको पेटबाट निकालियो ३५ किलो’को ट्युमर
गर्वका साथ भनौँ- ‘हामीले बनायौँ हाम्रो धरहरा’